WOWOW maviri Handle Yepfekeni Kicheni faucet Iine Side Sprayer Stainless Simbi
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Maviri Handle Kicheni Faucet Nedivi Sprayer Isina Simbi
faucet iyi inosanganisira side sprayer. Kuita mabasa ekuchenesa zuva nezuva kuve nyore, iwe unogona kuisa mukati nekuvimbisa, uchiziva kuti tapombi yekukicheni yakadzoserwa nehupenyu hwedu hwakaderera waranti.
Side sprayer kicheni faucet 23118A4
Side sprayer kicheni faucets inouya yakawanda masikirwo, mafomu uye saizi. Iyi chaiyo side sprayer kicheni faucet yeWOWOW inouya neinobatsira padivi sprayer iyo iwe yaunogona kushandisa kwekutanga-usati wako wakasviba mapoto, mapani uye ndiro. Rutivi sprayer zvakanyanya zvakanyanya runogona kuita kupedzisa mabasa ako epamba zuva rega rakareruka uye rinonakidza basa. WOWOW's side spray yakaiswa padivi padivi sprayer kicheni faucet pachayo, uye yakagadzirira kuburitswa kunze pakarepo uye nyore. Iine hose yayo yakareba mvura yemasendimita makumi matanhatu, ichawedzera nzvimbo yako yekugezesa zvakanyanya. Kunyanya kana kicheni yako yakarongedzwa neiri kunyura, iyi nzira yekuspiritira inogona kuuya inobatsira zvikuru. Wese nzvimbo, chinhu kana kona mukati uye yakakomberedza kicheni yako kunyura inogona kusvika neparutivi sprayer yeWOWOW 'side sprayer kicheni kiyi.
Rutivi sprayer rinokutendera iwe kuti uise zvakananga mvura nemvura nekureruka chengetedza kumashure-side bhatani pane sprayer pachayo. Kunze kwekutanga-kubikwa iwe unogona kushandisa iyo kusafuridza sprayer zvakare yekushambidza maoko, kana mamwe mabasa ekicheni. Iyo hose yemvura yedivi rekuspiritira yakabatana nehupfu uye yayo mvura inowanikwa nevhiri yakasarudzika. Ivhavha yekuvhenganisa iyi inodzora panotungamirwa mvura apo panoshandiswa sprayer parutivi. Nenzira iyi iwe unogona kuwana yakanyanyisa yakaoma-mvura-rwizi rwekunyatso kusimbisa-kubikisa mahwendefa ako, pasina kusunungura chero simba rayo.
Dhizaina side sprayer kicheni faucet
Rutivi rwuno sprayer kicheni faucet yeWOWOW yakagadzirwa nekutarisira kwakawanda uye kushanda nesimba. Vagadziri veWOWOW vaida kusanganisa akasiyana maficha kuitira kuti vauye kune yakashongedzwa, yemazuva ano, uye pamusoro pese ine ushingi mukicheni faucet dhizaini. Iyo yakakwirira-arc dhizaini yakasarudzwa, seinodaidzwa kuti gooseneck pakarepo inopa yakanakisa fashoni kukicheni kicheni. Kune rimwe divi, zvibato zviviri izvi zvakagadzirirwa kudhirowa kupa kubata kwakanaka kune ino divi re sprayer faucet yeWOWOW. Chekutanga pane zvese, mabato maviri akasarudzwa kuti ape chinonakidza neparutivi rwespiritiri yekicheni. Kechipiri, mabatiro awana yakakosha magadzirirwo ekugadzira iyi svutugadziro yekubheka kicheni kusina chokwadi mubato weziso mukicheni chero.
Iyo yakasarudzika chrome kupedzisa yeWOWOW's side sprayer kicheni faucet inoratisisa zvakanyanya. Nenzira iyi girazi-rakafanana nechitarisiko rinosvikwa, iro rinogona kusangana nechero chero chimiro chekushongedza. Iyo yepadyo svutugadzike yekicheni sipo mune simbi isina simbi, hunhu hwayo hwemaindasitiri hwekutarisa, iine yakanaka mukana mukana wekuti inogara kwenguva refu. Iko kupera kusine banga kunogona kunyatsoenderana nekuoneka kwekunyura kwako kwekicheni. Yako (nyowani) kicheni dhizaini ichave inosimudzira neiyi inoshamisa side sprayer kicheni faucet.
Chekutanga kirasi parutivi sprayer kicheni faucet
WOWOW inozivikanwa pasi rese kuti ipe yekutanga kirasi kicheni faucets nemutengo unodhura. Iwe unogona kunyatso kutaura kuti WOWOW inopa yakanakira mari. Mazhinji A-mabhurukuchaji katatu kana kunyange quadruple mutengo weiyo WOWOW inobhadharira kicheni faucets yayo, uye mhando yacho zvirokwazvo haina kuperera pane mamwe eaya maA-brand. Isu taigona kutaura chokwadi kuti hunhu hwedu hwatove nani pane akati wandei maA-brand. Isu tinoratidza izvi kazhinji uyezve.
Nekuti isu tinovimba nekukosha kwedu kwemari, tinokupa iwe-yemakore mashanu waranti-nguva. Kana yako side sprayer kicheni kiyi yaizove ikakuvara pane imwe nguva, WOWOW yaizofara kuitsiva neimwe nyowani nyowani. Pasina kunetsekana. Sevazhinji vatengesi, kunyangwe mamwe maA-brand, anokupa imwe chete gore regore waranti nguva, kuWOWOW isu tinofunga kuti isu tinofanirwa kupfuura kupfuura iyo indasitiri chiyero. Kana ruvhuru rwepurasitiki rerutivi rwako ruchinge ruchikuvara mushure memakore maviri kana matatu, hatifunge kuti zvingave zvakanaka kuti uchafanira kutakura njodzi yeizvi. A yepadyo sprayer kicheni faucet inofanira pasina mubvunzo kupera kweanenge makore mashanu, uye kuWOWOW tinotora mutoro wedu kune izvi.
Stainless simbi parutivi sprayer kicheni faucet
Iri divi rekusipiresi mapombi ekicheni akagadzirwa neyepamusoro-kirasi zvinhu. Iwe unoona izvi nekukasira paunobata parutivi pfapfaidzo yekubikira mukicheni mumaoko ako. Kurema kwacho kunoshamisa neinenge 50 oz, uye inoratidza hunhu hwezvinhu zvinoshandiswa. Sezvo pombi dzemakicheni dzakachipa dzinorema zvishoma, nekuti iko kushomeka kwekushandisa, kana kunyangwe kushomeka kwemidziyo yesimbi, WOWOW inodada neyemhando yepamusoro yezvinhu zvinoshandiswa. Brass zvinongedzo, isina simbi chikamu uye akakwirira-kuita mavharuvhu uye anobata. Iwe unoona mhando kana iwe uchizviona, uye nerutivi rwechipfapfaidzo chekicheni pombi yeWOWOW izvo hazvizove zvakasiyana.
Kunze kwekurema kwayo, kushandiswa kweakasiyana mashandiro erutivi urwu sprayer kicheni pombi inoratidzirawo hunhu hweichi chidimbu chemidziyo yekicheni. Maitiro anobata zvinofamba mushe musina kukakavara kana kudzosera kumashure semuenzaniso. Iko kutsetseka kushandisa hosi yemvura yeparutivi sprayer kune rimwe divi, uye kuti inodzokera sei kunzvimbo yayo yekutanga. Zvakare kuti zviri nyore sei kushandisa ino pre-rinsing yekumusoro sprayer ine isina simbi bhatani. Izvo zvese zvinowedzera kumusoro kune yakachena isina kutsinhwa mhando.
Easy-kumisikidza padivi sprayer kicheni faucet
Rutivi sprayer kicheni tepi iri nyore kwazvo kuisa. Sezvo zvinouya neiyo yakakwana yekumisikidza kit, iwe unogona kuisa ino yekupedzisira sprayer kicheni pombi mukati mehafu yeawa. Uye iwe haungatombode an anodhura pombi. Iyo yakajeka mirairidzo inoita kuti zvikwanisike kuisa rino divi rekuspraya kicheni pombi pombi iwe pachako, pasina kushandisa kwechero chakaomarara maturusi. Midziyo yese yekumisikidza ichi chidimbu chehunyanzvi mukicheni yako inouya inosanganisirwa.
Sezvo WOWOW ine nhamba iri kukura yevatengi vepasirese, avo vanoramba vachidzokera kuWOWOW pavanenge vachida imwe pombi, tinokupawo 90 yezuva rekudzoserwa mari garandi. Kunze kweye makore mashanu-asina njodzi garandi nguva, iwe unozowana yako mari kudzoka kuitira kuti iwe usazoshamiswa nekukosha kwemari iwe yaunowana neino parutivi sprayer yekicheni pombi. Iwe unowana kudzoserwa kuzere pasina mibvunzo yakabvunzwa. Chiitiko chedu chinotitaurira kuti hazvizove zvakakosha, asi isu tichava newe semumwe mutengi wehupenyu paWOWOW!
Izvo zvakanakira zvesipi sprayer mukicheni faucet mune zvishoma:
• Inopa wow-factor kune chero kicheni
• Yakasimba pre-rinsing parutivi sprayer
• Yakanakisa uye yakashinga dhizaini
• Anoshanda zvinyoro-nyoro mashira
• Stylish br br nickel kupera
• Easy nyore kuchenesa uye nyore kuchengetedza
SKU: 23118A4 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Bronze Nickel, Kuparadzanisa Kubata, Kurutivi Sprayer
WOWOW Wall Akakwira Pot Firiji MuBritain Nickel
WOWOW Yakanakisa Dhindaina Kicheni Faucet NaMagnet ...
WOWOW Pot Filler Faucet Pamusoro peStove In Bramm N ...